Immigration Lawyers & Consultants – South African Immigration® Archives for June 3rd, 2018
By: Immigration South Africa|In: Permits|Last Updated: June 3, 2018
South Africa Home Affairs outlines fees and terms of Zim permits Pretoria – Home Affairs Minister Hlengiwe Mkhize on Friday announced terms and conditions of the new four year non-renewable permit regime for close to 200 000 Zimbabweans based in South Africa, under the dispensation termed the Zimbabwean Exemption Permit (ZEP). “Conditions of the new Zimbabwe…
By: Immigration South Africa|In: Current Affairs|Last Updated: June 3, 2018
Canada asks Zimbabwean & Haiti people to apply for permanent residence Canada’s Immigration Minister Chris Alexander and Citizenship, and Canada’s Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, Steven Blaney, declared the temporary suspension of removals for Zimbabwe and Haiti has been revoked effective immediately. Canada want to help you With the suspensor now…
Canada gives Zimbabwean 6 months to apply for permanent residence Canada’s Citizenship and Immigration Minister Chris Alexander, and Canada’s Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, Steven Blaney, declared the temporary suspension of removals for Zimbabwe and Haiti has been revoked, effective immediately. With the suspensor now lifted, affected people will likely be given…
Canada gives Zimbabwean 6 months to apply for permanent residence Canada’s Citizenship and Immigration Minister Chris Alexander, and Steven Blaney, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness in Canada, announced the temporary suspension of removals for Zimbabwe and Haiti has been revoked, effective immediately. With the suspension now lifted, affected, individuals will be supplied…
By: Immigration South Africa|In: Home Affairs|Last Updated: June 3, 2018
Immigration appealed to Zimbabweans to get legal Cape Town – Deputy Minister of Home Affairs, Fatima Chohan, has appealed to Zimbabweans living in South Africa to get their documentation in order. Zimbabwe – Immigration to South Africa Many immigrants to South Africa from Zimbabwe are still forbidden. “The South African government appeals to Zimbabwean…
By: Immigration South Africa|In: South Africa|Last Updated: June 3, 2018